पूर्वडीआईजी पार्वती भन्छन्–भण्डारीलाई दोहोर्‍याउनु स्वार्थीपना, शहिद परिवारका आशुको श्राप लाग्ला — OnlineDabali
पूर्वडीआईजी पार्वती भन्छन्–भण्डारीलाई दोहोर्‍याउनु स्वार्थीपना, शहिद परिवारका आशुको श्राप लाग्ला
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमालेको यो निर्णयसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा राखेका थिए । जीवनभर राजनीतिमै लागेको व्यक्ति त्यति आशा गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तर, पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याउने निर्णय अस्वाभाविक हुन्छ ।
एमालेको निर्णले मर्ने बेलासम्म पदमा बसिरहने नेपाली राजनीतिको रोग दोहोरिएको प्रतिक्रिया आएका छन् । यसैबीच पूर्व डीआईजी पार्वती थापा मगरले एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याउनु भन्दापनि अन्य ऊर्जाशील व्यक्तिले अवसर पाउनु पर्ने बताएकी छन् ।
थापामगरले सबै आफूले नै खाउँ र अरु मरुन् भन्ने नियतका कारण आफू सिनियर हुँदाहुँदै डीआईजीबाटै विदा लिनु परेको समेत उल्लेख गरेकी छन् । थापाले सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेको धारणाः
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति पदको प्रसंग
अरू सब मरून दुर्वलहरू…’ भन्ने कविताका हरफहरू सार्थक बनाउन खोजेझैं हालका नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः सोही पद दोहोरिन खोज्नु भनेको अलि स्वार्थीपना जस्तो देखिएन र ? उहाँभन्दा अगाडिदेखि पार्टीलाई बढि योगदान दिएका, जेलनेल खाएका र योग्य व्यक्तिहरूको ताती पनि लामै होला नी । राष्ट्रपति पदमा विराजमान हुन पाउनु पनि जीवनमा यति ठूलो उपलब्धी प्राप्ति हो । यतिकैमा सन्तुष्ट हुँदा राम्रो हुन्छ होला भण्डारी म्याडम । होइन भने अन्य तपाईँजस्तै हजारौं शहिद परिवारका आशुको श्राप लाग्ला चेतना भया ।
राजनीति गर्न चप्‍पल लगाएर काठमाडौं छिरेका तिमीहरु कसरी घर मालिक भयौं ? अब चिहान बास हुनेछ